The ထဲမှာအမြင်အာရုံအရှိဆုံးဖမ်းဆီးနေရာများတစ်ခု Lego ရုပ်ရှင် 2: ဒုတိယ Part 70840 ၏နောက်ကွယ်မှဒီဇိုင်နာများ Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါသည်။ သူတို့ကဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးဘယ်လိုရှင်းပြပါ
အများကြီးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရှိပါတယ် Lego အစုံ The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art အခင်းအကျင်းတစ်ခု၊ 70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ်!။ သော Mad Max စတိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအပန်းဖြေကမ်းလှမ်း Lego minifigures ရုပ်ရှင်၏အဖွင့်ပွဲတွင်တိုက်ရိုက်နေထိုင်သည်၊ အစုသည်ကစားနိုင်စွမ်းနှင့်ပြည့်နှက်နေသောအထင်ကြီးလောက်သောမျက်နှာပြင်အပိုင်းအစကိုပေးထားသည်။
ဒီကြီးမားတဲ့အသစ်စက်စက်ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင် Senior Model Designer Justin Ramsden နဲ့ Graphic Designer Paul Constantin တို့နဲ့အတူထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Brick Fanatics.
ဒီအစုံကိုဘယ်လိုကန ဦး စတင်ခဲ့တာလဲ။
ဂျက်စတင်: ဒါဟာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကျွန်တော်တို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ခဲ့သည် Lego အုပ်စု။ DUPLO ကျူးကျော်ပြီးငါးနှစ်အကြာမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီပိုပိုပိုလစ်ကုန်းမြေကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်ခဲ့တာပါ။artကျနော်တို့ဒီဇိုင်းသောအယူအဆနှင့်အတူပယ် ed ။ Jonas Norlénနှင့် Nic Vas startဤအကွန်တိန်နာအခြေအနေတွေအပေါ် ed ed ပြီးတော့ Joel Baker startLiberty ၏ရုပ်ထု၏ပုံကြမ်းအောင် ed ။ သူကငါနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်ဒါကြောင့်သူ့ပုံကြမ်းကိုယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတာကအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ပုံကြမ်းဖြစ်ပြီးအဲဒါကိုထုတ်ပစ်လိုက်ပြီးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်လာအောင်လုပ်လိုက်တာပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများနှင့်အလွန်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးရုပ်ရှင်ကိုအမြဲကြည့်ရှုသည်၊ ဇာတ်ညွှန်းကိုဖတ်သည်၊ အယူအဆကိုမြင်ခဲ့သည် art ဒီ Post-Apocalyptic Vibe ကိုရအောင်လုပ်ပြီးဒါကိုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။
ဂျက်စတင်: အတိအကျ။ ၎င်းသည်ခက်ခဲသောထောင့်များနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာများနှင့်ပြည့်နှက်သည်။ တည်ငြိမ်မှုရှိရန်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်ကလေးများကတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့် Apocalypseburg ကိုပြန်လည်စုစည်းဖို့အတွက်စွန့်စားခန်းကြီးတစ်ခု၊
ဂျက်စတင်: အလှအပအတွက်ကတော့ရုပ်ရှင်ထဲကကွန်ပျူတာဖိုင်အားလုံးကိုပေးပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတွေနဲ့နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ရတာကြောင့်ငါတို့ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ငါတို့လည်းထည့်ချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ် - ငါ့ညီမှာရှိခဲ့တဲ့ထရပ်ကားတစ်စီး၊ Model Team ထရပ်ကားတစ်လုံး၊ ရေစုပ်စက်တစ်လုံးလိုငါဖုံးကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ပေါလ်နဲ့ကျွန်မနှစ်ယောက်စလုံးဟာ The ကနေ Batmobile မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် Lego Batman ဒီရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ပြီးဒီပုံပြင်တွေကိုပြောပြနိုင်တာအရမ်းကောင်းတယ်။ Apocalypseburg သည်အလွန်ကြီးမားပြီးကျယ်ပြန့်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်တွင်၎င်းကိုဖမ်းယူပြီးရုပ်ရှင်ထဲတွင်သင်မတွေ့ရသောပုံပြင်များကိုပြောပြရန်မှာအလွန်ကောင်းသည်။
သင်ဘယ်လို minifigures forhog ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့တာလဲ 70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ်!?
ရှင်ပေါလု: Justin ပြောနေစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာ Warner Bros နဲ့နီးကပ်စွာပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပြီးသူတို့အကြံပေးချင်တဲ့သဘောတရားတွေကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မယ်။ 'ငါတို့ကဒီနောက်ခံဇာတ်ကောင်ကိုလုပ်သင့်တယ်၊ Batman'' ကျနော်တို့များသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အယူအဆဖျော်ဖြေ, လုပ်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ် Lego- ဗားရှင်း။ သူတို့အများစုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် 'ဒီဟာကပိုကောင်းကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်' တစ်ခုခုကိုအကြံပေးလိမ့်မည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့မှန်ပါသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံ '' ဒီဟာကကောင်းတယ်၊ ငါတို့နဲ့အတူသွားမယ် '' ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ Batman နှင့်ဒီအရူးပခုံး pads ။ ' ကျနော်တို့အချိန်အများစုကိုတစ်ဝက်တွေ့ဆုံရန်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာအလွန်နီးကပ်စွာပူးပေါင်းမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဇာတ်ကောင်များသည်ဤစကြဝuniverseာတွင်ပိုင်ဆိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ အရာအားလုံးသည် grittier ဖြစ်သည်၊ အရာအားလုံးသည်ပိုမိုသတ္တု၊ ပျက်စီးမှုရှိသော်လည်းအားနည်းဟန်ရှိသည်။ သူတို့က DUPLO ကိုယူဖို့လိုတယ်၊ ကျူးကျော်မှုကိုဆန့်ကျင်ဖို့လိုတယ်။ အစပိုင်းတွင်သူတို့ကိုနည်းနည်းကြောက်ရန်အစီအစဉ်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့ကအေးအေးဆေးဆေး၊ သံခမောက်လုံးများ၊ ပခုံးကွင်းများဖြစ်ရန်လိုသည်။
ဂျက်စတင်: ငါတို့ဒီဒြပ်စင်အသစ်တွေပါဝင်ပြီးလူတိုင်းကို DUPLO ကျူးကျော်မှုဖြစ်စေနိုင်သလိုစစ်ဆင်နွှဲနိုင်တာတကယ်ကိုဝမ်းသာပါတယ်။
ရှင်ပေါလု: မင်းတို့ဇာတ်ကောင်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့အားလုံးဟာဒီအစုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Harley Quinn အကြောင်းသူငါ့ကိုမေးခဲ့တယ်art ဒီ၏။ အစအ ဦး ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်စကြာ ၀ fullာအပြည့်အ ၀ အတွက်အဓိကဇာတ်ကောင်များ၊ အဓိကဇာတ်ကောင်များ၊ ဘေးထွက်ဇာတ်ကောင်များ၊ နောက်ခံဇာတ်ကောင်များနှင့်ဇာတ်ညွှန်းတွင်အရာများပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ ဤဇာတ်ကောင်သည်ဤနေရာတွင်အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ပေ။ ကျနော်တို့ကန ဦး စီစဉ်ထားတယ်။
← LEGO Movie2ဗီဒီယိုဂိမ်း The Prophecy DLC သည်မူရင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်များကိုပြန်လည်သယ်ဆောင်ရန်
LEGO Stores တွင် LEGO Movie230529 Mini Master-Building Emmet polybag ကိုအသုံးပြုထားသည် →